Abahlinzeki Imikhiqizo Eningilizayo Ye-Stamping Imikhiqizo kanye Nezimboni - Abakhiqizi bemikhiqizo yaseChina e-Steping
Inqubo yokukhiqiza yezinsimbi zokuphela kwesihlungi ifaka ukuqopha, ukuklaya, amashidi angenalutho, nokubhoboza.Isithombe senqubo yokukhiqiza sinjengalokhu okulandelayo: 2.Izinto ezisetshenziselwa ukukhiqiza iziqongo zokuphela kwesihlungi zifaka insimbi ebunjiwe, insimbi engahambisani neminwe, insimbi engagqwali. , nezinye izinto eziningi .Izihloko zokugcina zokuhlunga zinezimo ezahlukahlukene njengesidingo esihlukile. Ngayinye yezinsimbi ezintathu inezinzuzo zayo. Insimbi yeGalvanised ihlanganiswe ne-zinc oxide ukuvikela ukugqwala, ngoba isiluleko samakhemikhali ...
I-mesh ye-1.Filter ibizwa nangokuthi izingxenye zokugcina isitembu, izinto eziyinhloko zemeshini yokuhlunga ifaka insimbi engenasici 201,304,316,316L.Ingaphezulu lingapendwe ngombala wethusi noma wethusi.Lisetshenziselwa kakhulu ukuhlunga amanzi, ukudla kanye nokwelapha okwelapha.I-mesh mesh inezinzuzo ezithile ezifana nefomu elihle lokunyathela, ukumelana okuhle kokuqina, ukumelana nokushisa, ukumelana nengcindezi, anti-ukugqwala. Futhi singenza ngokwezifiso ngokusho kwesidingo nekhasimende lesicelo sakho. Kunezindlela ezimbili zokukhiqiza inqubo: ...